Yako Yemagariro Media Kushambadzira inoda Mifananidzo | Martech Zone
Yako Yemagariro Media Kushambadzira inoda Mifananidzo
Chishanu, April 26, 2013 Mugovera, June 13, 2015 Douglas Karr
Simba rezvenhau kugona kugona kwevateereri vako kana nharaunda kudzora meseji yako kuti iwedzere kusvika kwayo. Kune vatengesi, hunyanzvi hwavanoda kugona kugona kugona kuona kuti vanoshandisa mameseji ari anoshamisa. Kuziva kuti mifananidzo inowedzera mukana wekuti meseji yako igovewa zvinoreva kuti nharembozha yako yekushambadzira inofanirwa kuisa mifananidzo.
Ndicho chimwe chezvikonzero nei isu tichidawo vedu vanotitsigira, Depositphotos. Ivo vane yakakura sarudzo yemifananidzo inodhura yaunogona kushandisa kupfekedza ako enhau midhiya emakampeni.
ichi infographic kubva kuLTU inonongedza mamwe eanonakidza manhamba ane chekuita nevezvenhau mifananidzo uye mifananidzo. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve Visual Brand Intelligence, tora yedu whitepaper Brand Intelligence muzera reMifananidzo.
Tags: mifananidzomifananidzo mu twittermifananidzo yemagarirotwitter mifananidzo